रोजगारीमा लगानी बढाउने गरि बजेट ल्याउन अर्थविदहरुको सुझाव | Sagarmatha TV
रोजगारीमा लगानी बढाउने गरि बजेट ल्याउन अर्थविदहरुको सुझाव
काठमाडौं । अर्थबिदहरुले रोजगारीमा लगानी बढाउने गरि बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सिंहदरबारमा आज बसेको संसदको अर्थ समिति बैठकमा उनीहरुले आगामी बजेटमा खर्च कटौती गरी रोजगारीमा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
त्यस्तै उनीहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सुझाव दिएका छन् । बैठकमा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
उनले लकडाउन हुने पूर्व संकेत पाउँदा पनि सरकारले त्यसको तयारी नगरेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । अर्थविद् डा. शंकर शर्माले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
राहत र रोजगारीको कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ । अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले पर्यटन क्षेत्र, मेघा सिटी लगाएतका कार्यक्रमहरुलाई यस पटक निरन्तरता दिन नहुने अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी, डा. शंकर शर्मा, विश्वम्भर प्याकुरेको जोड रहेको छ ।
छलफलमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खर्चमा आधारित बजेट प्रणालीलाई नतिजामा आधारित बनाउनुपर्ने तथा विभिन्न प्रकारका बोर्डहरु खारेज गरी खर्चमा कमी ल्याउनु पर्ने बताए ।